Myat Shu - 2012 January
You are here : Myat Shu » Archives for January 2012
Published By Myat Shu On Tuesday, January 24th 2012. Under ကဗျာ, မျက်ရှု
ရန်သူစစ်စစ်ပေါများခြင်းသည် မင်္ဂလာတစ်ပါး မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာက မိတ်ဆွေစစ်စစ် ရိုးလွန်းတော့ အ လည်လွန်းတော့ ထုံ အံဆွဲထဲ အလားအလာရှိသော လူရည်ချွန်စာရင်းထဲ ခင်ဗျားအတွက် ကျောနံပါတ်တစ်ခု စပွန်ဆာ ရထားပြီးပါပြီ မကြာခင် ခင်ဗျားနားထင်မှာ သွေးဆူပြီး ပွဲလမ်းသဘင်တွေ ခြေချင်းလိမ် နိုး… နိုး ကျွန်တော် ဖျာဝင်ခင်းမယ့် စိတ်ကူး လုံးဝ.. လုံးဝ (၁၉၉၄ ခု ပိုလန်နိုင်ငံ ၀ါဆောဒေသရှိ ဂျူးလူမျိုးများ သိသာထင်ရှားသော တံဆိပ်တပ်ဆင်ရန် အဖြူရောင်အောက်ခံ ခြောက်ထောင့်ပုံ ကြယ်ပြာတစ်လုံးနဲ့ဒီဇိုင်း) နိုင်ငံတကာသတင်းဟောင်းတစ်ခု မှတ်ချက်။	။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် အောက်မေ့ဘွယ် လေလံပစ္စည်းများ အမွေဆက်ခံခွင့် ထောက်ခံချက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြရန် ကျွန်တော့်အဖြစ်နဲ့ တခြားစီ မှားပြီးဖြေမိတဲ့ အင်တာဗျူးလည်းပြီးရော ချက်ချင်းပဲ နာမည်အရင်းနဲ့ အလုပ်ခန့်စာ ရောက်လာတယ် ရင်းရင်းနှီးနှီး အသိအကျွမ်းထဲကပါပဲ ကျင့်သားရမျက်လုံးက လမ်းမတူပေမယ့် ထိပ်တိုက်တွေက မမြင်ဟန်ဆောင်ပုံက မှင်သေလွန်း တို့လူမျိုးက သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်ဆို ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ တစ်ဝိုင်းတည်း တစ်အိုးတည်း ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, January 22nd 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
“ကိုင်း … ၁၃ နှစ်သမီးလေးကို ထိတွေ့စို့ …လူစုံပြီ” ကိုမြတ်ဝင်လာတာနဲ့ သက်တမ်းရင့် ၀ီစကီပုလင်းကိုလှမ်းရင်း ကိုလေးက ပြောတော့ ၀ီစကီဖန်ခွက် ရေခဲ ဆော်ဒါဘူးတွေ အဆင့်သင့်ပြင်ပေးဖို့ မောင်ဌေးကို တိုးတိုး မှာရတယ်။ လူစုံအောင် စောင့်နေရင်း တချို့က ၀ိုင်၊ တချို့က ဘီယာသောက်နေကြတဲ့အတွက် ဘီယာခွက်တွေကိုပါ သိမ်းလိုက်ဖို့ ပြောရတယ်။ အင်း ကလေးတွေတော့ ခွက်သိမ်းရ ဆေးကြရနဲ့ အလုပ်များကြဦးမှာပဲ။ တခါတခါ စဉ်းစားမိတယ်။ တခါသုံးခွက်တွေနဲ့ဆို ကလေးတွေသက်သာမှာလို့။ ကိုလေး အော်ဟစ်သံကြီး အရင်ဆုံးထွက်လာမှာ မြင်ယောင်မိပြီး ကျောတွန့်သွားတယ်။ သူက ဘယ်အရည်ကို ဘယ်ခွက်နဲ့၊ ဘယ်ဟင်းကို ဘယ် ဇွန်း၊ ခက်ရင်း ဆိုတာမျိုးတွေ အတော် အရေးထားတဲ့သူကိုး။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, January 20th 2012. Under ကဗျာ, မျက်ရှု
ငါရပ်နေတဲ့ ဒီမြေကြီးဟာ ငါ့အဖေရဲ့ အဖိုးခုတ်ထွင်ရှင်းလင်း အစပြုလို့ ဘ၀အခြေတည်ခဲ့တဲ့ နေရာပေါ့။ ငါ့အဖိုးဟာလည်း အနောက်ကလာသူတွေရဲ့လက်ထဲ ကြွေးမဆုံးရအောင် အသက်နဲ့ရင်း ဒီမြေကို ကာကွယ်သွားခဲ့သေးတယ်။ ဒီမြေကြီးတွေ ကျန်းမာရေးကောင်းမှ ၀မ်းလှမှာမို့ စောင့်ရှောက်ပါလို့ တဖွဖွမှာတဲ့ ငါ့အဖေ ခေါင်းချသွားတော့ သူ့အရိုးပြာတွေ ဒီမြေပေါ်မှာ ငါကြဲရင်း ငိုခဲ့တယ်။ အိုးသစ်အိမ်သစ် ထူထောင်တော့မယ့် ငါ့သားဟာလည်း မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဒီမြေကြီးကို စိုက်ပျိုးထွန်ယက်နေလေရဲ့။ ညက အိပ်မက်ထဲ အရှေ့အရပ်ကလာတဲ့ နဂါးကြီးဟာ ဒီမြေထက်ဝယ် ဖွဲ့ခွေနေလေတော့ ဇောချွေးတွေနဲ့ လန့်နိုးလာခိုက်မှာ မြို့က ဆရာလေးပြောတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဒီမြေတွေကို ငါတို့မပိုင်ဘူးဆိုတာ သွားအမှတ်ရနေမိတယ်။ “သူခိုးက လူဟစ်” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ် တွေးဆနေမိခိုက်မှာပဲ ဘိုးဘေး ဘီဘင်တွေရဲ့ ကျိန်စာတွေ ငါ့နားထဲမှာ ပဲ့ထင်ထပ်နေတယ်။ ငါနားမလည်တဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ငါတို့မျိုးဆက်တွေပဲ မှားခဲ့တာလား ထားပါတော့လေ။ မိုးပေါ်ကကျလာတဲ့ မြေပိုင်သခင်ကြီးရယ် လွတ်လပ်စွာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရှင်သန်ခွင့်လေးများရှိရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေး စိုက်ပျိုးပါရစေ။ မြေစောင့်ဘီလူးတွေကို ပူဇော်ပသပြုနေရတာတွေလည်း တတ်နိုင်သမျှ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, January 14th 2012. Under ဘာသာပြန်, မျက်ရှု
သူတို့သည် ရေစက်လက်နှင့် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို သူမထံသို့ သယ်ယူလာပြီး မီးဖိုချောင်က သံကွပ်ပျစ်ဟောင်းပေါ်မှာ ချလိုက်ကြသည်။ “ရေနစ်သွားလို့” တစ်ယောက်က ပြောသည်။ သူ့ အသံမှာ တစ်ခန်းလုံး ပျံ့နှံသွားပြီးလျှင် စိတ်ချောက်ချားနေသော ပိုးဖလံပမာ ပြတင်းမှန်ကို တိုးဝင် ရိုက်ခတ်သွားသည်။ “ဟင့်အင်း၊ သူ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး” သူမက ပြောလိုက်သည်။ သူတို့၏ မျက်နှာတွေမှာ ချုံးကျနေ၏။ မျက်လုံးတွေကလည်း သူမကို မကြည့်။ ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ အစန့်သား ဖြစ်နေသော သူမ၏ ခင်ပွန်းထံမှာလည်း လွှဲဖယ်ကာ လက်ဆေးခွက်၊ ပြတင်းပေါက် အနီးမှ ကြက်မောက်ပန်း၊ ကြမ်းပြင် စသည်များ၌သာ ရောက်နေသည်။ “အလုပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ မြစ်နားမှာ ကစားကြတယ်။ သူက မြစ် ဟိုဘက်ကမ်းကို လက်ပစ်ကူးပြမယ်၊ ... Continue Reading
သူကရ ဒန္တံ အဟံ ပူဇေမိ
Published By Myat Shu On Monday, January 9th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
ကောင်းကင် နိုင်ငံပြု အနုပညာ မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ “မိုးစိပ်ပြုပွဲ၊ သန်ကျူးစဲက၊ ခ၀ဲပွင့်ဝါ၊ သို့သောခါတုံ၊ အာကာမထိုင်း၊ မြူမှိုင်းမလည်၊ အလွန်ကြည်လျက်၊ ဆီးရည်လည်းကျ၊ သရဒနှိုက်” အသျှင်မဟာသီလ၀ံသ (သျှိသျှားကန်ဘွဲ့မော်ကွန်း) (၁) သရဒဥတု ရောက်ပြီတည့်။ တစ်ဝါတွင်းလုံး တအုန်းအုန်း တဒိုင်းဒိုင်းနှင့် ရှစ်ခွင်တိုင်းတွင် ကြီးစိုးမင်းမူ၍ ငြိုးမာန်ဖွဲ့ကာ မစဲနိုင်ဘဲ သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့သော ရွှေမိုးညိုကို ကဏ္ဍကောဇလုပ်မည့် ဆီးနှင်းတို့ ရောက်ရှိလာပါပကော။ “ဆီးနှင်းတစ်ပြိုက်၊ မိုးတစ်လိုက်” ဆိုသည့်အတိုင်း မိုး၏ ရာဇပလ္လင်ကို ဆီးနှင်းက ကြားဝင်လုရန် ကြံလေ၏။ မိုးကား သူ အားမတန်သည်ကို သိသောကြောင့် အမျက် မာန်စောင်ကို အသာချ၍ မဆုတ်ချင် ဆုတ်ချင်နှင့် တွန့်ဆုတ် တွန့်ဆုတ် လုပ်ကာ ဝေးရာသို့ ပြေးရန် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, January 8th 2012. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ
ဧရာဝတီမြစ်မပြင်ကျယ်ထဲကို မိုးစက် မိုးပေါက်တွေ ခုန်ပေါက်ကျဆင်း နေကြတယ်။ လေကလည်းထန်နေတော့ လှိုင်းတွေက တ၀ုန်းဝုန်း။ စစ်ကိုင်းတံတား ကြီးအောက်က လှိုင်းတွေကြားထဲမှာ ကျွန်မတို့ 'ငှက်' ကလေး တလူးလူး တလိမ့် လိမ့်ဖြစ်နေပြီ။ လှိုင်းလုံးတွေကနေ မျက်နှာကို ဖြန်းခနဲ ဖြန်းခနဲ လာစဉ်တဲ့ ရေစက်လေးတွေက အေးစိမ့် နေတာပဲ။ ကြည့်ပါဦး။ မိုးစက်မှုန်မှုန်တွေကြားထဲမှာ ရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျရဲ့ အလှ။ ဟိုမှာဘက်မှာ စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင်ရဲ့ အလှ။ ငယ်ဘ၀ကတည်းက အမြဲမြင်တွေ့ စွဲလမ်းခဲ့တဲ့ ဒီမြင်ကွင်းဟာ ခုထိ လည်း မရိုးနိုင်သေးပါလား။ ကျွန်မ စွဲလမ်းနေတုန်းပါလား။ "မှိုင်းမှိုင်းရိပ်မှောင် .. စွန်တောင်မှင် ..ပြိုမှာလေလားမိုးရဲ့ .. စိုးအောင် ခုပင် ..အမ္ဗုန်မောင် .. ဖန်အားလေ ရက်နှင် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, January 7th 2012. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ချစ်သောသားလေး ရဲဝဏ္ဏ မြန်မာပြက္ခဒိန်ရဲ့ ၁ဝ လမြောက် ကိုသားသိတယ်နော်။ သား စကားတတ်စ အရွယ်ကတည်းက တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လ ညောင်ရေသွန်းပွဲဆိုပြီး ၁၂ လ ရာသီပွဲတွေကို ရွတ်ဆိုရင်း မြန်မာလတွေကို သားလေး အလွတ်မှတ်မိသွားတာမဟုတ်လား။ အဲ့သည် လတွေထဲမှာ သားသိတဲ့ ပြာသိုလရဲ့လပြည့်နေ့ကို ဖေဖေတို့ နိုင်ငံမှာ အမေနေ့လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ အမေနေ့ဆိုတာ ဖြစ်လာဖို့အတွက် ကွယ်လွန်သူ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီး၊ စာရေးဆရာကြီး ဘဘဦးသုခ က အဓိက ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တာပေါ့ သားရယ်။ '' အမေ ..''ဆိုတဲ့ ရင်တွင်းလှိုက်သံကြီးနဲ့ ဘဘ ဦးသုခက အမေရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကို ရွတ်ပြလိုက်တာ မှာ ဖေဖေတို့ နှလုံးသားမှာ နင့်နင့်နဲနဲဖြစ်အောင် ခံစားလိုက်ရတာပါပဲ။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, January 5th 2012. Under ၀တ္ထု, ဘာသာပြန်, မျက်ရှု
ဖာတစ်ကျက္ကရာဝတီသည် ရွာရှိကလေးများ၏ ခေါင်သူကြီးဖြစ်သည်။ တစ်နေ့သ၌ သူ၏ ဦးနှောက်ထဲတွင် ကစားရန်အတွက် အကြံသစ် ဉာဏ်သစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာလေ၏။ မြစ်ကမ်းပါး ရွှံ့နွံပေါ်၌ လှေရွက်တိုင်လုပ်ဖို့ရန်ထားသော သစ်တုံးကြီးတစ်ခု ရှိလေသည်။ သူ၏ အကြံမှာ ထိုသစ်တုံးကြီးကို သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ၀ိုင်းတွန်းပြီး မြစ်ထဲသို့ မျှောပစ်ဖို့ ဖြစ်လေ၏။ သစ်တုံးပိုင်ရှင်သိလျှင် ဘယ်လောက် ဒေါပွမည်နည်း။ ဘယ်လောက် အံ့အားသင့်မည်နည်း။ ထိုအခါ သူတို့ ပြောင်လှောင်ရယ်မောရပေလိမ့်မည်။ ယင်းသို့ တွေးလျက် ကလေးအားလုံးကလည်း သူ့အကြံကို ထောက်ခံကြလေ၏။ သို့ရာတွင် သူတို့ ထိုအကြံအတိုင်း စိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့် သစ်တုံးကိုတွန်းမည်ပြုသောအခါ ဖာတစ်၏ညီ မခန်လာလ်သည် ဣနြေ္ဒကြီးတစ်ခွဲသားနှင့် ဘာမပြော ညာမပြော ထိုသစ်တုံးပေါ်သွားလျက် ခွထိုင်လိုက်သည်။ ဖာတစ်၏ အဖော်အားလုံး ကြံရာမရ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, January 3rd 2012. Under မျက်ရှု, အက်ဆေး
ရင်ဘတ်။ ၁။ အောင်ဆန်း၊ ဂန်္ဒီ၊ ဆွန်ယက်ဆင်၊ ဟိုဆေးရီဇာ၊ မင်ဒဲလား၊ မာတင်လူသာကင်းအငယ် တို့၏ လိပ်ပြာလှသော အဖြူရောင်ရင်ဘတ်များဖြင့် လူသားများ၏ အိပ်မက်တို့ကို တပ်ဆင်ခဲ့ကြကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ သိနားလည်ခဲ့ကြသလို ဟစ်တလာ၊ စတာလင်၊ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်၊ မူဘာရက်၊ ဘင်လာဒင်တို့၏ အမည်းရောင်ရင်ဘတ်များက သူတို့သမိုင်းကို သူတို့ရေးသည်ဆိုသော်လည်း ထိုသမိုင်းများသည် အမှတ် ၁၀၀ ဖိုးဖြေပြီး ၇၅ မှတ်ရလျှင် ဂုဏ်ထူးထွက်သော သမိုင်းများလောက် အမှန်တကယ် မလွယ်ကူမှန်းကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့၏ သမိုင်းအသိများတွင် သိရှိထားကြပြီးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော့် အနေနှင့် သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်လှန်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါ။ အလန်ဂျင်းစ်ဘတ်၏ ရင်ဘတ်၊ မြသန်းတင့်၏ ရင်ဘတ်၊ အမီတာဂို့ခ်ျ၏ ရင်ဘတ်၊ ... Continue Reading